Vägen fududahay i laga hadlo arrimaha farsamada iyadoo la isticmaalayo erayada, sawirada, iyo sawirada
Waxaan booqday shabakad kasta oo marti gelisa shirkadaha martigelisa, waydiisatay taageerada iyada oo adeegsanaysa nidaamka sheekaysiga ku nool, waxayna qoreen waayo-aragnimadayda khariidad. Sidoo grönkål, waqtiga sugitaanka si aad u hesho jawaabta ugu horreysa ee cashar kasta ayaa la duubay.
WebbhotellTirada Isku daygaAvg. Waqtiga sugaMa qanacsan tahay? Aflagaada
Arvixe 1 6 min 28 sek Awood uma lihin in ay gaarsiiyaan shaqaalaha taageerada iyagoo ku sheekeysanaya. Nidaamka ayaa codsaday i aan u diro e-post ahaan. Eeg sawirka-2 (hoos) oo tixraac ah.
Dot5 Hosting 1 32 sek Sheekada Live live waa markii ugu horeysey ee lala xiriiro. Sidoo grönkål, xusuusnow i dadka isticmaala ay u baahan yihiin inay galaan kahor intaanay helin caawimaada DreamHost taageerida sheekada.
Kör pappa 1 15 sek Ka heli karin badhanka wada sheekaysiga tooska ah goobta GoDaddy, laakiin waxay bixiyaan laba lambar oo maxalli ah (Malaysia) si ay u wacaan. Waxaan isku dayay mid ka mid ah lambarada nambarkeygana waxaa laga soo qabtay ilbidhiqsiyo 10. Nasiib darrose, dhibaatooyinkaygu waxay ahaayeen kuwo aan xallin ka dib daqiiqadihii 10 ee taleefanka. Shaqaalaha taskuleynta aad ugama aysan aqoonin wax soo saarkooda; Aakhirkii waan är taagay oo waan soo afjaray taleefanka.
Hostgator 4 4 min Awood uma lihin in ay gaarsiiyaan shaqaalaha taageerada iyagoo ku sheekeysanaya. Nidaamka ayaa codsaday i aan u diro e-post ahaan. Eeg sawirka-4 (hoos) oo tixraac ah.
Siteground 1 30 sek Jawaab degdeg ah, su’aalaheyga waxaa laga jawaabay si xirfad leh. Nidaamka taageerida sheekada wanaagsan (fiiri shaashadaha slang) iyo shaqaalaha aadka u taageera. Dhibaatada guud ee guud.
WebHostFace 2 25 sek Jawaab degdeg ah, su’aalaheyga waxaa laga jawaabay si xirfad leh. Dhibaatada guud ee guud. Iyadoo la eegayo i WebHostFace ay ku soo dallacayso wax ka yar $ 2 / mo, shirkaddu waxay igu la yaabtay taageerada ay ku nool yihiin nolol fiican.
Imtixaankan, waxaa jira waxyaabo, sida kör ahaanshaha iyo xirfadaha wada xiriirka, oo aanan garan karin oo till qiimeyn u sameyn karin.
Mid ka mid ah xubnaha shaqaalaha ee InMotion Hosting waxay arkeen arrin suurtagal ah oo la xidhiidha xisaabteyda (inanan andayn oo uu iska indho-tiray) inta lagu guda jiray fadhigeena wada-xaajoodka, waxaanan bilaabay.
WP Motor waxay e-post u dirtay maalin dambe si loo hubiyo in arrimahayga la xaliyay.
Ka hor inta aanad dhicin vax gunaanad ah, waxaa jira laba arrimood oo aad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso:
Waxaan ku noolahay Malaysia, saacadda GMT + 8. Waqtiga joogtada ah ee xiriirka ah ee tijaabadan waa 2 illa 5 galabtii, taas oo ah habeenboolka Maraykanka. Uma maleynayo inay tahay cadaalad ah in la filo taageerada tooska ah ee ku noolaanshaha aqalka habeenkii – gaar ahaan haddii aad la macaamilayso shirkadaha martigelinta yar.
Sheekada Live Live ma aha sida kaliya ee martigelinta shirkadaha bixiya taageerada maanta. Inta badan, dadka isticmaala waxay heli karaan taageerada iibka kadib e-post, telefon, iyo warbaahinta bulshada. Markera laga reebo GoDaddy kiiskan, ayaan weli isku dayin taageerada telefonka i tijaabadan.
Wixii A2 Hosting – Tani waa waxa Lori ii sheegey ka dib markii ay akhristay oo edebtay mitt inlägg
Waxaan isticmaalaa A2 Hosting oo marwalba e-post ayaan u diraa. Waligey dhibaato kamaan helin inay dib iigu soo laabtaan daqiiqado gudahood, laakiin waligey maan helin dhibaato ubaahan i badan oo gadaal iyo gadaal ah waxaan ubaahanahay wadahadal toos ah, sida darteed taasi waxay xaiso ahaayay.
Bild-1: Ma aanan awoodin inaan gaaro taageerada A2 Marti-gelinta iyada oo loo marayo wada-hadalka tooska ah waxaana lagula talinayaa in aan diro emayl bedel ahaan.
Bild-2: Ma jirin cid ka jawaabtay codsigeyga sheekeysiga ee B3. Guddiga wada hadalada ayaa i weydiiyay e-postkayga.
Bild-3: BulwarkHost nidaamka sheekeysiga ku noolaanshaha ayaa ahaa xayiraad markii aan soo gaadhay.
Bild-4: Dhammaan waaxyaha HostMetro waa markii ugu horeysey ee lala xiriiro.